Allbergsbacken no Holm ny pulk- ary toboggan hazakazaka No. 1 amin'ny tora-pasika izay ahatazanana Holmsjön. Mba hahazoana ny havoana an-tongotra, amin'ny fiara na scooter. Indraindray koa nisoroka fiara zaridaina amin'ny läggdan vao ambonin'ny havoana.
Tokony isika hiditra any an-paharivan'ny andro, dia nidina faingana jiro tanana an-toerana. Ny jiro dia tonga miaraka amin'ny fanampian'ny ny Fahazavana (maitso), nipetraka teo lampstolpen ny lalana. Ny jiro hivoaka avy hatrany amin'ny fameram-potoana.
T.v.: Pictures of an-tendrombohitra, fanatanjahan-tena fialan-tsasatra 2012.
T.H.: Button, mba hiala amin'ny jiro.
Hill no misy ambany Way 320 (62°39’10.3″N 16°38’09.4″E) vid korsningen in mot Holms Kyrka när man kommer österifrån – från Sundsvall. Eo amin'ny sarintany etsy ambany hanao zoom in ka jereo kokoa ny marina.
Miverina amin'ny Leisure